GOOD APK BLOG
Super oneclick root
Huawei Official firmwares
ဒီဘလော့ကို ဆက်ရေးချင်သူရှိပါက noliasv@gmail.com သို့ဆက်သွယ်တောင်းယူနိုင်ပါသည်
Stop blogging (ဘလော့ရေးသားမှုရပ်ဆိုင်းခြင်း)
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဘလော့ ရေးသားမှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါသည်။ ဤဘလော့ကို ဆက်လက်ရးသားလိုသော မိတ်ဆွေများရှိပါက လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဘလော့ရေးသားလိုသူ မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် noliasv@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
at 8:23 AM No comments: Links ယူရန်အောက်ကစာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ
from : MMAP
Application Developer Name- ကိုဇော်သူရိန်ထွန်း (i-Campus Complete IT Solution)
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာအောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ်တိုက်စစ်ကြည့်လို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ ။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို Myanmar Lottery ဆိုပြီး နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ် ကံစမ်းထားတဲ့ အောင်ဘာလေထီလတ်မှတ်က ထီပေါက် မပေါက် စစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထီပေါက်စဉ်တွေလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးအသုံးပြုဖို့အတွက် ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ Myanmar Lottery ဆော့ဝဲလေးကို မုံရွာမြို့မှ IT ပညာရှင်ကိုဇော်သူရိန်ထွန်း ကရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာထီပေါက်စဉ် (Myanmar Lottery) for Android အားရယူရန်
at 8:52 PM No comments: Links ယူရန်အောက်ကစာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ
from : MMAPP
Application Developer Name- Joe Win
Android ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာသွင်းထားစရာမလိုဘဲ တစ်ဖက်ဖုန်းကနေမြန်မာလိုပို့လာတဲ့ Message တွေကိုမြန်မာလိုမြင်နိုင်၊မြန်မာလိုပြန်ရိုက်နိုင်တဲ့ Message application လေးဖြစ်တဲ့ SMS for MM (မြန်မာ SMS) for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Message တွေကို မြန်မာစာမလိုဘဲ မြန်မာလိုဖတ်ရှုနိုင်သလို ၊ message ၀င်လာတဲ့အခါမှာလည်း Pop-up Window လေးနဲ့ Message ကိုဖတ်ရှုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုဖို့ ဖုန်းကို root လုပ်ထားစရာလည်းမလိုပါဘူး ။ ဒီဆော့ဝဲလေးထဲမှာ မြန်မာစာရိုက်ဖို့ကတော့ Frozen Keyboard လိုမြန်မာစာကီးဘုတ်တစ်ခုခု ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို Android Developer ‘Ko Joe Win’ ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ SMS for MM ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
SMS For MM (မြန်မာ SMS) for Android အားရယူရန်
at 8:49 PM No comments: Links ယူရန်အောက်ကစာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ
fTalk: Facebook chat on the go 1.2.3882
fTalk: Facebook chat on the go 1.2.3882's Description
Android ဖုန်းတွေကနေ facebook မှာ chatting လုပ်ဖို့ ftalk Application လေးပါ။
user name , password ထည့်ပြီး gtalk လိုပဲ chatting လုပ်နိုင်မှာပါ။
Download fTalk: Facebook chat on the go 1.2.3882 အားရယူရန်
You can now enjoy fTalk Facebook chatting on the go and beyond the confines of your computer!
The clean interface makes it very simple to use and the light design won’t drain your smartphone. fTalk’s new app is colorful, easy and fun.
Simplify your social media activities and start enjoying fTalk mobile now!
- Fun emoticons to add more moods, humor and zest to your Facebook chats
- Update your status and receive real time notifications when friends come online
- Clean and colorful interface that is easy to use
- Light app that won’t drain your battery
fTalk: Facebook chat on the go 1.2.3882's Screenshots
Download fTalk: Facebook chat on the go 1.2.3882
at 5:05 PM 1 comment: Links ယူရန်အောက်ကစာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ
GOthere Myanmar အသုံးပြုနည်းအပြည့်အစုံ
Smart iPhone5Lock Screen 1.4
Hot news ဂျာနယ်
ရွှေပြည်သုခ စီးပွားရေး လမ်းညွှန်
zawgyi font changer ( rooted)
D Foo's Ideas Official Thein Htut's blog
samsung mobile product support
သင်လိုချင်သော software အမည်ကိုရှာရန်
free call (5)
zawgyi font (3)
Myanmar Keyboard (2)
Admmin talk (1)
Gothere mm (1)
free message (1)
request suggest (1)
Nolias Volkas. Simple theme. Powered by Blogger.